Ngabe konke kusahamba kahle ngoTokyo? | Scrolla Izindaba
Ngabe konke kusahamba kahle ngoTokyo?
Abantu baseNingizimu Afrika babheka ukushabalala nokuwa kwesithunzi sikaTokyo Sexwale, indoda eyayilindelwe ngabaningi ukuthi izoba ngumengameli, yaphendukela kwezombusazwe njengomuntu odidekile obelokhu ecabanga ngemali yesikhwama engangezigidigidi zamarandi.
Ngasekuqaleni kweminyaka yama-2000, uSexwale, owayengumgcinimafa we-ANC, uMnuz Mathews Phosa kanye noCyril Ramaphosa babalwa njengabantu abaqavile ababezovala isikhala salowo owayenguMengameli wangaleso sikhathi uThabo Mbeki.
Bobathathu laba basolwa ngisho nangokwakha itulo lokubulala uMbeki.
Eminyakeni engama-20 eyalandela, uSexwale wenza onke amaqhinga ayekhona ukuze azakhele indawo etafuleni eliphakeme le-ANC.
Ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela ye-ANC ngowe-2007, uSexwale wethula owakhe umkhankaso wokuba ngumengameli wagcina esejoyina uJacob Zuma, owahlula uMbeki engqungqutheleni ye-ANC.
Muva nje uSexwale uzithole ebuyela etafuleni eliphakeme le-ANC njengoNgqongqoshe Wezokuhlaliswa Kwabantu futhi njengelungu leKomidi Eliphethe Likazwelonke le-ANC.
Kusukela lapho, igama lakhe livele kanye nalabo abaphakanyiswe ngamagatsha ahlukene ukuthi benze umsebenzi ophezulu we-ANC ngosuku olwandulela yonke ingqungquthela yokukhetha ubuholi.
Sekuyiminyaka okungenani engama-20, uSexwale engumuntu othembekile kuZuma owayemanqikanqika ezama ukuzibonakalisa ukuthi uzimele kwipolitiki yamaqembu.
Kule nyanga, ngosuku olwandulela enye ingqungquthela ye-ANC, uSexwale ubuyile kwezepolitiki, okuyinsakavukela umchilo wesidwaba ngesimangalo esithi amabhange ezentengiselwano kanye nabaholi bakahulumeni baphange izigidigidi zamarandi ezazihlanganiselwe ukusiza izwe ukuba libhekane nezinselelo eziningi.
USexwale ukhiphe imibono yakhe esithangamini sabezindaba wadalula uMengameli uCyril Ramaphosa, uNgqongqoshe wezeziMali uTito Mboweni, umbusi we-Reserve Bank uLesetja Kganyago kanye noMgcinimafa we-ANC uPaul Mashatile.
Ubuye futhi waba yisisulu sombono wozungu onezimpande zenganekwane ye- “White Spiritual Boy Trust”, okwabikwa yi-Business Insider ize yenqatshwa yi-QAnon, uhlelo elalisekela uDonald Trump.
Leyo ndaba ithi kubiwe imali engamadola ayizigidigidi ezingama-600 zamaRandi, okungaphezulu kuka- $ 3 trillion egcinwe kwi-akhawunti yaseNingizimu Afrika yase-Standard Bank. Okungenani izinombolo zikaSexwale bezithe ukwehla – wathi kusetshenziswe budedengu imali engu- $ 110 trillion.
Kodwa uMgcinimafa Kazwelonke kanye ne-SA Reserve Bank bazichitha lezi zinsolo zikaSexwale njengezingekho emthethweni.
Noma kunjalo, ungacabangi ukuthi umsebenzi wakhe wezepolitiki usuphelile. Njengoba kungahambi kahle emkhankasweni wobumengameli ka-Ace Magashule, uSexwale kungenzeka ukuthi azibeke ethubeni lokuthi aqhamuke njengomuntu ozongenela ukhetho lukamengameli weqembu likaZuma kwi-ANC.